1 Tantara 8 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 8
Ny taranak'i Benjamina sasany.
1Ny naterak'i Benjamina dia Belà lahimatoany, Asbela lahiaivo, Aharà fahatelo, 2Nohaà fahefatra, ary Rafà fahadimy. 3Ny zanakalahin'i Belà dia Adara, Gerà, Abioda, 4Abisoe, Naamàna, Ahoe, 5Gerà, Sefofàna ary Horama.
6Izao no zanakalahin'i Ahoda: lohan'ny fianakaviana nonina tao Gabaà izy ireo, ary nafindrany tany Manahata: 7Naamàna, Akià, ary Gerà ilay namindra azy sy niteraka an'i Ozà sy Ahioda.
8Niteraka tao amin'ny tanin'i Moaba, Saharaima, taorian'ny nisaorany an'i Josima sy Barà, vadiny. 9Hodesa vadiny no niterahany an'i Jobaba, Sebià, Mosà, Molkoma, Jehosa, Sekià ary Marmà. 10Ireo no zanany lahy, loham-pianakaviana. 11Ary Hosima no niterahany an'i Abitoba sy Elfaala. 12Zanakalahin'i Elfaala: Hebera, Misaama ary Samada, izay nanorina an'i Onao sy Loda mbamin'ny tanàna momba azy.
13Barià sy Samà, lohan'ny fianakaviana nonina tao Aialona no nampandositra ny mponina tao Geta. 14Ahiao, Sesàka, Jerimota, 15Zabadia, Aroda, Hedera, 16Mikaela, Jesfà ary Johà no zanakalahin'i Berià. 17Zabadia, Mosoliama, Hezesì, Hebera, 18Jesamarì, Jezlia, ary Jobaba no zanak'i Elfaala. 19Jasima, Zekria, Zabdia, 20Elioenaia, Seletaia, Eliela, 21Adaia, Baraia ary Semarata no zanak'i Semeia. 22Jesfàna, Hebera, Eliela, 23Abdona, Zekria, Hanàna, 24Hananià, Elama, Anatotià, 25Jefdaià ary Fanoela no zanak'i Sesàka. 26Samsarì, Sohorià, Otolià, 27Jersià, Elià ary Zekrià no zanak'i Jerohama. 28Loham-pianakaviana ireo, samy loholona araka ny fihaviam-pianakaviany, ary nonina tao Jerosalema.
29Tao Gabaona no nonina ny rain'i Gabaona, ary Maakà no anaran'ny vadiny. 30Abdona no zanany lahimatoa, dia Soara, Kisa, Baala, Nadaba, 31Gedora, Ahiao ary Zakera. 32Makelota niteraka an'i Samaà. Nonina tao akaikin'ny rahalahiny koa ireo tao Jerosalema, niaraka tamin'ny rahalahiny. 33Nera niteraka an'i Kisa, Kisa niteraka an'i Saola, Saola niteraka an'i Jonatàna, Melkiasoa, Abinadaba ary Esbaala. 34Zanakalahin'i Jonatàna: Meribaala. Meribaala niteraka an'i Mikà. 35Zanakalahin'i Mikà: Fitona, Meleka, Toraà sy Akaza. 36Akaza niteraka an'i Joadà, Joadà niteraka an'i Alamata, Azmota ary Zamrì; Zamrì niteraka an'i Mosà, 37Mosà niteraka an'i Banaà; Rafà zanany, Falsà zanany, Asela zanany. 38Nanan-janaka enin-dahy Asela ka ireto avy no anarany: Ezrikama, Bokrao, Ismaela, Sarià, Obdià ary Hanàna: zanaka'i Asela avokoa ireo. 39Zanakalahin'i Eseka rahalahiny: Olama lahimatoany, Jehosa faharoa, ary Elifaleta fahatelo. 40Ny zanakalahin'i Olama dia lehilahy mahery sady mpandefa zana-tsipìka; ary nanan-janaka lahy aman-jafy maro izy ireo, dia dimampolo amby zato.
Ireo rehetra ireo dia taranak'i Benjamina avokoa. >